Mpirahalahy, fitantarana misy zanakalahy roa. Famerenana. | Vaovao IPhone
Mpirahalahy, tantaran'ny zanakalahy roa dia lalao izay misy tantara somary manaitra. Momba ny famoizana olona sy ny fomba hihoarana ny toe-javatra toy izany. Ao amin'ny tantara dia misy fifangaroan'ny fahatsapana toy ny fahasambarana, ny fitiavana, ny tahotra ary ny fahatsapana hafa izay tsy te-hanazava tanteraka aho mba tsy hanimba azy, fa isika rehetra dia manaiky ny tantara no tsara indrindra amin'ity lalao ity.
Manomboka ny lalao amin'ny fampisehoana amintsika ny toe-javatra iray izay nahitana olana tamin'ilay zanany faralahy tao anaty rano niaraka tamin'ny reniny. Avy eo dia hitantsika eo anoloan'ny fasan-dreniny izy, hita fa voakasik'izany fotoana izany. Fotoana fohy taorian'izay dia lasa nitady azy ny zokiny lahy nilaza taminy fa narary ny rainy ary tsy maintsy entin'izy ireo mody. Eo no manomboka ny lalao ary ahitantsika izay tokony hataontsika: fehezinao izy mirahalahy miaraka amin'izay.
Nilaza tamin'izy ireo ny rainy fa ny hany zavatra afaka mamonjy azy dia ny hazon'aina ranoKa nanapa-kevitra ny handeha hanao dia lavitra izy roa lahy hanavotana ny ain-drainy, dia lalana iray izay hanaovan'izy ireo ny zavatra rehetra, fa ny ekipa rehetra. Tsy mahagaga raha raha mijery akaiky ianao, dia mitovy loko sy mena ary manga ny mpirahalahy, izay ny loko izay nampiasaina hatrizay tamin'ny lalao izay azo lalaovina amin'ny milina arcade taloha.
Miaraka amin'ny mpanara-maso ankavia dia hafindra ilay zoky lahy, izay manana tanjaka bebe kokoa amin'ny toe-javatra sasany, toy ny fampiakarana ny zokiny amin'ny ambaratonga avo kokoa hanao hetsika hafa. Miaraka amin'ny marina, hofehezinay ilay zandrilahy lahy, iza no afaka miakatra amin'ny toerana avo kokoa na miditra amin'ny lavaka kely kokoa. Ho fanampin'izay, manana fampihorohoroana amin'ny rano izy, zavatra iray izay hanan-danja ihany koa amin'ity tantara momba azy mirahalahy mianadahy ity.
Ny mekanika lalao dia niniana natao ka andao hahatsapa zavatra manokana ho azy mirahalahy, zavatra ho hitantsika rehefa mandroso isika. Ho fanampin'izany, manampy antsika koa io hahatakatra fa tsy samy afaka manao na inona na inona samirery isika, raha tsy izany dia tsy maintsy natao izy ireo miray hina foana ary miara-miasa miatrika zava-tsarotra.
Ilay lalao tsy dia sarotra. Ny sisa ataontsika dia ny mifandrindra sy mampiasa ny fanaraha-maso araka ny tokony ho izy, zavatra izay tsy ho sarotra ho antsika izay efa nanana console efa ela. Na izany na tsy izany, raha mbola tsy nilalao Controller misy hazo roa ianao na te hilalao 6 na 7 taona dia lojika dia ho lehibe kokoa ny fahasahiranana. Ho fanampin'ireo kitay dia mety hiseho koa ny bokotra iray hifaneraserana amin'ireo zavatra sasantsasany izay ho hitantsika amin'ny diantsika. Ny zavatra sarotra indrindra ho hitantsika amin'ny lalao iray manontolo dia ny teboka iray izay tsy maintsy hifehezantsika haingana ireo mpirahalahy amin'ny fomba roa samy hafa, izay somary mampatsiahy ny fitsapana ara-psikôtika izay ataon'izy ireo hahazoana anay na hanavao ny fahazoan-dàlana mitondra fiara. .
Na eo aza izany, na dia tsy ny tsara indrindra ho an'ny konsol aza ny lalao, mety hiova ny zavatra raha ampiasaintsika amin'ny finday. Ny filalaovana Controller natao ho an'ny hetsika dia tsy hitovy velively amin'ny filalaovana eo amin'ny tampon'ny mikasika izay ekena ny fanaraha-maso tsotra. Amin'ny console dia zatra mifehy bebe kokoa isika ary eo ny Rahalahy: Tale of a Two Sons dia tsy nahomby loatra.
Mikasika ny sary, ny Brothers dia mahafeno tanteraka ny antenaina amin'ny lalao ho an'ny fitaovana finday. Araka ny hitanao amin'ny pikantsary teo aloha, dia tsara ny landscapes, saingy tsy izy ireo no tsara indrindra hitantsika tao amin'ny App Store. Manaraka fotsiny izy ireo.
Mikasika ny audio, ny fiteny an-tsaina, mba hahafahan'ny mpampiasa mieritreritra izay lazainy amin'ny fotoana rehetra. Farafaharatsiny tsy miteny anglisy izy ireo, izay mety ho zavatra tsara raha tsy miteny zavatra manan-danja tokony ho hitantsika izy ireo. ny tsara be ny feon-kira, na dia misy aza ny fotoana nandaniany ny fikasana hitondra fihetsem-po ho an'ny mozika ihany koa.
Misy ny ampahany amin'ny tantara izay niova rehefa nitondra azy tamin'ny lalao finday, zavatra izay tsy nankafina indrindra ary bebe kokoa raha raisintsika ho tantara fa ny tanjak'ity lalao ity dia ny tantarany. Saingy, ho an'ny ambiny, ny Rahalahy dia nahatratra telefaona finday tena tsara nefa tsy very antsipirihany lehibe, zavatra iray izay mampiseho ny ezaka sy ny asa lehibe ataon'ireo mpamolavola azy.
Ny fehin-kevitra dia ny lalao Brothers izay lalao tsy maintsy hofehezintsika mirahalahy mianadahy amin'ny lalao tsy dia sarotra loatra amin'ny dia hamonjy ny ain-drainy. ny vidiny, € 4.99, Mety ho toa avo izany raha toa ka manantena hetsika bebe kokoa isika, ary betsaka kokoa raha raisintsika an-tsaina fa tsy amin'ny vidiny ambony lavitra noho izany ny fampiononana. Na ahoana na ahoana, raha mitady tantara tsara mampihetsi-po ianao, dia mety izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Rahalahy, fitantarana misy zanakalahy roa. Famerenana lalao momba ny fahaverezana
Ananako ary tiako ilay izy na dia very indraindray amin'ny fanaraha-maso aza aho satria raha tokony ho iray dia misy roa izay tsy maintsy araraotiko! lol 😀
Nan dia hoy izy:
Nahavita azy tao anatin'ny iray andro aho. Tena mora sy fohy, na dia eo aza ny fanaraha-maso, izay mitaky fikirakirana ireo tarehin-tsoratra roa miaraka, dia mamela zavatra be faniriana, indrindra amin'ny fandosiran'ilay dragona ao anaty lanezy. Recommended, na dia efitrano fanatsarana aza.
Mamaly an'i Nan